सुपादेउरालीको दर्शन गरि जेठ ३० गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस् ! भेटी स्वरुप सबैले शेयर पनि गर्नुहोस ! – Samriddhakhabar
सुपादेउरालीको दर्शन गरि जेठ ३० गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस् ! भेटी स्वरुप सबैले शेयर पनि गर्नुहोस !
June 12, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on सुपादेउरालीको दर्शन गरि जेठ ३० गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस् ! भेटी स्वरुप सबैले शेयर पनि गर्नुहोस !
धन कमाउने योग छ तथा फलिफाव हुने दिन छ । पशुधनबाट प्रशस्त फाइदा हुने देखिन्छ । काम बन्नाले सुखको अनुभव हुन्छ । रमाइलो दिन छ । पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् ।
काम बन्नाले सुखको अनुभव हुन्छ । नोकरीमा दिन सामान्य रहला । अनेक किसिमका फाइदा हुनेछ । अप्रत्याशित लाभ हुनेछ । कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ । सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिने र साख जोगाउन सकिने छ ।
काममा समस्या देखिएला । अनेक किसिमका झमेलामा परिएला । आज केही हानि हुन सक्छ, सावधान रहनु होला । नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ । बोली वचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ । मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुनेछैन ।
तपाइको आफ्नो विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । धन कमाउने योग छ । परोपकारका काममा पनि मन जानेछ । धन आर्जनमा राम्रो दिन छ । आश्वासन दिनेहरूबाट धोका पाइने छ । नजिकका साथीभाइ टाढिने सङ्केत छ ।
अनौठो तरिकाले कमाइ भइ मन खुशी बन्ला । टाढाको यात्राको पनि योग रहेको छ । फलिफाब हुने दिन छ । राम्रो कमाइका कारण सुख मिल्नेछ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । पितृधन उपयोग गर्दा अझ लाभ हुन सक्छ ।
टाढाको यात्रा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने केही दिनका लागि स्थगित गर्नु बेस हुनेछ । केहि सुख केहि दुख हुनेछ । अचानक कमइ हुनेछ । लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ ।
गरेका कामबाट ठूलो उपलब्धी लिन सकिंदैन । समयको ब्यर्थ नाश होला । व्यर्थको खर्च होला । नसोचेको ठाँउमा खर्च हुन सक्छ । यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मनोरञ्जनमा भुलिने समय छ ।
अवसरको खोजीमा केही दौडधूप गर्नुपर्ला । अनावश्यक यात्राको योग छ । सुखको अनुभव हुन्छ । आफन्त मिलनले सुख दिनेछ । अरूका काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ वा सानातिना घरेलु काममै अल्झनुपर्दा मन खिन्न रहने छ । प्रयत्न गरे पनि परिश्रम निरर्थक हुनेछ ।
श्रद्धा र परोपकारमा मन जानेछ । स्वास्थ्यमा भने कमजोरी अनुभव हुनेछ । खर्च भन्दा कमाई नै बढी हुनेछ । शिक्षामा पनि राम्रो प्रगति हुनेछ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइने छ । प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ ।
दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । साथै पैसा कमाइने छ । विपरित लिङ्गिको हौसलाले मन रमाउनेछ । मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट काम बन्ला । पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदा हुने योग छ ।
बिहान काम बन्नेछ, बेलुका सामान्य तनाब होला । इष्टमित्रहरुसँग असमझदारी बढ्न सक्छ । वादविवादको सामना गर्नु पर्ला । गोपनीय ढंगले गरिएको कामबाट मनग्ये फाइदा हुनेछ । सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ ।
पेशागत रुपमा समस्या देखिन सक्छ । केहि सुख केहि दुख हुनेछ । नोकरीमा झमेला ब्यहोर्नु पर्ला । जागिरको काममा डर हुनेछ । सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छ । भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय छ ।
काठमाडौंमा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको पुत्ला दहन
आजको राशिफल २०७७ फागुन १४ गते, शुक्रवार
February 26, 2021 February 26, 2021 खबर समृद्ध
आजको राशिफल २०७७ चैत ४ गते, बुधवार ,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस
March 16, 2021 March 17, 2021 खबर समृद्ध
आषाढ १५ गते मंगलबार : सुपादेउरालीको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोस् ! भेटी स्वरुप सबैले शेयर पनि गर्नुहोस !
June 28, 2021 June 28, 2021 खबर समृद्ध
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
आज सुनको भाउ कति हेर्नुहोस् ?
कक्षा १२ सहित सबै तहका परीक्षा स्थगित हेर्नुहोस्।
© 2020-2021, All rights reserved to Samriddhakhabar	| Theme: News Portal by Mystery Themes.